शिक्षा / स्वास्थ्य « Online Tv Nepal
५ दिनमा यी ३ लक्षण देखिए तुरुन्त कोरोनाभाइरस परीक्षण गराउनुस्, संक्रमण भएको हुन सक्छ ! सेयर गरौ
कोरोनाभाइरसको प्रकोप विश्वभर बढिरहेको छ । १६२ देशमा यसको संक्रमण देखिएको छ र १ लाख ८० हजार भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् । यही बीच पछिल्लो रिपोर्टमा सुरुवाती ५ दिनभित्र ३ खास लक्षण देखिएमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण भएको हुन सक्ने दावी गरिएको छ । जर्नल एनल अफ इन्टरनल मेडिसिनको एक रिपोर्टका
ज्योतिषी भन्छन् : नेपालीको छाला गहुँगोरो वर्णको भएकाले कोरोनाभाइरस लाग्दैन ! सेयर गरौ
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको प्राण घातक भाइरस ‘कोरोना’ले अहिले विश्वव्यापी रुपमा एक प्रकारको महामारीको रुप नै लिईरहेकोे छ । अहिलेसम्म करिब १६२ देशमा संङ्क्रमण फैलिसकेको तथ्यांक छ। गत डिसेम्बरको अन्त्यतिरबाट चीनको वुहान क्षेत्रबाट फैलिएको उक्त प्राण घातक भाइरसबाट ७ हजारभन्दा बढि मानिसको ज्यान गइसकेको छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको उक्त
टेकुबाट कोरोना शंकास्पद बिरामी आफूखुसी निस्किएपछि सुरक्षाकर्मीको माग !
टेकु अस्पतालबाट कोरोनाभाइरसको आशंका गरिएका बिमारी आफूखुसी निस्किन थालेपछि अस्पतालले सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता औंलाएको छ। शुक्रबारमात्र अस्पतालबाट कोरोनाको आशंका गरिएका एक ब्रिटिस नागरिक आइसियू कक्षबाटै निस्किएर अर्को अस्पताल पुगेका थिए। अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारीले उनलाई बस्न आग्रह गर्दा पनि निस्केर गएको बताए। ‘उहाँलाई हामीले बस्न निकै आग्रह गर्यौं तर उहाँले
क्वारेनटाइन तोडेर प्रेमिकाको जन्मदिन मनाउन गएपछि जोभिचलाई गिरफ्तार गर्ने चेतावनी !
रियल म्याड्रिडका फरवार्ड लुका जोभिचले सर्बियामा क्वारेनटाइन तोडेपछि सरकारका प्रधानमन्त्री आना ब्रानाबीच र राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर भुचिचले गिरफ्तार गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण युरोपेली फुटबल ठप्प भएपछि जोभिच आफ्नो देश सर्बिया फर्केका थिए । तर रियल म्याड्रिडले त्यसअघि नै आफ्ना सम्पूर्ण खेलाडी, अफिसियल तथा कर्मचारीलाई आ–आफ्नो बासस्थानमा
कोरोनाभाइरस: चैत ९ देखि २१ गतेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिने घोषणा !
प्रधानमन्त्री ओलीले स‌ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी क्षेत्रले प्रदान गर्नेअत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा चैत ९ गतेदेखि २१ गतेसम्म रोक्ने बताए। उनले सबै सरकारी कर्मचारी र अत्यावश्यक क्षेत्रमा खटिने निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूले नियमित काम गर्ने उल्लेख गरे। नेपाल भित्रने सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू चैत्र ९ देखि १८ गतेसम्म
कोरोना भाइरस : ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १० हजार नाघ्यो, ज्यान गुमाउने चीनमा भन्दा इटलीमा धेरै !
कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १० हजार नाघेको छ । एक सय ७९ देश र एउटा पानी जहाजमा फैलिएको कोरोनाका कारण अहिलेसम्म १० हजार ४१ जनाको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । झण्डै दुई लाख ४५ हजार ३३ जना सङ्क्रमित भएकोमा ८८ हजार एक सय ५१
इटलीमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सर्वाधिक, चीनभन्दा पनि माथि !
इटलीमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३,४०५ पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। त्यो सङ्ख्या गत वर्ष कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण सुरु भएको चीनको भन्दा बढी हो। चीनमा अहिलेसम्म ३,२४९ जनाको ज्यान गएको बताइएपछि तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नहरू उठी नै रहेका छन्। नयाँ निर्देशन मार्च १२ तारिखदेखि इटलीमा मानिसहरूलाई बाहिर निस्कन लगाइएको प्रतिबन्ध अब मार्चको अन्त्यसम्म नै
आफ्नो रोगसँग लड्ने क्षमता कसरी बढाउने ? जानीराखौ
हरेक मानिससँग कुनै पनि रोगसँग लड्ने क्षमता फरक फरक हुन्छ । रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता बढी भएका मानिसहरु कम बिरामी हुन्छन् भने यो क्षमता कम भएका मानिसलाई धेरै रोग लाग्छ भन्ने धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, कसरी रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने र त्यसमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरा धेरैलाई
भोलिदेखि सुरु हुने एसईई परीक्षा स्थगित, त्रिविका सबै परीक्षा पनि रोकिए !
भोलिदेखि सुरु हुने यस बर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको छ । कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमणले विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको वखत नेपालमा पनि त्यस्को असर देखिदा एसईई परीक्षालाई लिएर पनि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । तर सरकारले पूर्वसन्ध्यामा मात्र आएर यो निर्णय गर्दा सदरमुकाम लगायत
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै एसईई परीक्षा स्थगित
सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थगित गरेको छ ।विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विहीबार (भोलि) देखि हुने परीक्षा स्थगित गरिएको हो कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलपछि एसईई परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय भएको खबरहबलाई जानकारी
छोरी सरहको युवती ताक्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्ने पौडेल फरार
काठमाण्डौ । नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्ने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल
काठमाण्डौमा हैजाको त्रास : ‘डीएफटीक्यूसी’ नम्बर उल्लेख भएको जारको पानीमात्र पिउन आग्रह
काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रयोग भइरहेको सबैजसो पानीका स्रोतमा हैजाका जीवाणु ‘इक्रोलाई’ भेटिएपछि सरकारले उपभोक्ता सचेत गराएको
१५ दिनमा हलेसी मन्दिरको भेटी करिब ४ लाख
हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीको साझा आस्थाको केन्द्र हलेसी मन्दिरबाट १५ दिनको अवधिमा करिब ४
छोरी सरहको युवती ताक्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्ने
काठमाण्डौमा हैजाको त्रास : ‘डीएफटीक्यूसी’ नम्बर उल्लेख भएको जारको
पाथीभरा क्षेत्रको महत्व : ऐतिहासिक-पौराणिक पृष्ठभूमिको रहस्यमय जानकारी